Adut Akech na unthụnanya Adhụnanya nke Adut Akech Na-ejikọ Ahụnanya Egwuregwu
Ndụ, ịke na ọdịbendị ọdịbendị ya na onye nwere oke mmetụta…
Jennifer Lopez atụgharị 51: Ileba Anya Maka Nleta Ya, Egwu Ma Oyi
Joge na-adịbeghị anya, Sudan-Australian supermodel, Adut Akech, dị akụkọ mgbe o yiri ka ọ gbara égbè na Instagram na Nigerian Afro-pop artiste, Runtown.
Na mbido ọnwa a, izu ole na ole ka anyị hụchara mgbanwe ọkpụkpọ egwu ha, Adut kesara vidiyo nke ya na Runtown na-ejikọ ọnụ na akụkọ Instagram ya. Maka ndị hụrụ na mgbasa ozi na-elekọta mmadụ, ọ bụ mmegharị ọsọ ọsọ.
- Odion Bello-Audu (@ odlanky30) July 7, 2020
Ọbụna ngwa ngwa bụ vidiyo ọhụrụ Akech na-ekerịta na akụkọ Instagram ya na Wednesde, na-egosi supermodel na-eti mkpu na ndị enyi ya na iji akwa ọla.
Akụkọ kwuru na onye ọkaibe na Naịjirịa #Runtown na-edina enyi ya nwanyị ndị Sudan #AdutAkech. Runtown gara na akụkọ Insta ya iji kesara enyi ya nwanyị Australia-Sudan - Adut, ebe ọ na-ejizi mkpịsị aka ya mee mgbaaka diamond na mkpịsị aka ya.
A post na-akọrọ site Igwe mmuta (TCS) (@the_commentsection) na Jul 22, 2020 na 1: 02am PDT
N'oge na-adịghị anya mgbe nke ahụ gasịrị, Runtown n'onwe ya kesara foto nke ha abụọ na akụkọ Instagram ya na Akech nke nwere otu mgbanaka. Isi mmalite na njikwa ọbụ abụ kwenyesiri ike na onye na-agụ egwú anaghị arụ ọrụ nakwa na mgbanaka ahụ bụ naanị mgbanaka nkwa.
Ebe ọ malitere
Banyere Adut Akech
Nwa amadi a nke gbara afọ iri abụọ emebiala ọtụtụ ihe n’ọrụ ya. N'afọ 20, ọ meriri ihe ngosi BFA Ejiji nke afọ ahụ, ihe nlele nke ụlọ ọrụ nke afọ, wee pụta na ndepụta ndepụta Top 2019 Magazine Time.
Ezinụlọ na Mmalite
Ezinaụlọ Akech (gụnyere nne ya na ụmụnne ya ise) kwagara Australia site na ogige ịta ahụhụ na Kenya ebe ezinụlọ ya gbagara South Sudan n'oge otu nsogbu ndọrọ ndọrọ ọchịchị obodo ahụ.
Ekeresimesi nwere ike idi ebe m siri bia, mana mmuo a ka di ndu 😆Im ekele diri ekeresimesi ozo ya na ndi m huru n'anya nke ezinulo m - Enwerem olile anya na onye obula n’obodo Australia nweburu ezi na ulo ha na ndi enyi ha. Nye ndi ozo niile n’ememe ugbua Agin ekeresimesi si n’ebi Akech rue gi! ❤️🎄😘✨
A post na-akọrọ site Adut Akech Bior (@adutakech) na Dee 25, 2017 na 7: 59am PST
N'Australia, ọ nakweere aha nne ya, Mary n'ihi na o siri ike ndị nkuzi n'ụlọ akwụkwọ sekọndrị ịkpọ aha nna ya, Akech. Ọ gbanwere aha ya naanị mgbe ọ malitere ịme ngosi.
Maka supermodel, akụkọ ihe mere eme ya dị ya mkpa nke ukwuu na ọrụ ya, “Tupu m nwee ihe ọ bụla, abụ m onye gbara ọsọ ndụ, enwere m obi mpako na nke ahụ,” ọ gwara Vogue Australia.
Akech chọtara Akech mgbe ọ dị naanị afọ iri na atọ mgbe ụlọ ọrụ na-ahụ maka ịlele mpaghara mara ọkwa ya. Emere ka amara ya na ụwa nke ejiji mgbe ọ gbanwere maka akara uwe nwanne nwanne ya. Modelzọ ọrụ mmezi ya bidoro na afọ 13 mgbe o binyere aka na Chadwick Models na Sydney, Australia. N’oge na-adịghị anya, ọ bịanyere aka na Saint Laurent na nkwekọrịta pụrụ iche nke nwere ya na-eme isi Mgbapụta Ego Ewupụta mbụ na ngosi nke SS16 nke Paris na Paris.
Adut Akech Walks maka Jacquemus L'Amour SS21 Show
Na 2017, ọ zutere supermodel akụkọ ifo Naomi Campbell ha abụọ jikọrọ ọnụ nke ọma ruo mgbe Adut kpọrọ nwanyị nke abụọ. Mgbe ọ na-ekwu okwu na Naomi na Grazia Daily, Adut kwuru, Ọ na-enye m ọtụtụ ndụmọdụ. Kemgbe ahụ, mmekọrịta anyị ka na-eto ma na-eto. Ọ bụ ya bụ ezinụlọ mbụ m nwere na New York. ”
Ya na nne nke nwere ugwu ugwu, Naomi Campbell (R)
Abalị abụọ ahụ ga-anọchi anya Beyoncé Kpalọnụ Anya Mkpapụta ọhụrụ ka ekesara na njedebe nke ọnwa a na Disney.
Naomi Campbell na Adut Akech na-ekwu okwu Di iche iche na ejiji na ịbụkwa ezigbo onye nlereanya na "Onweghị ọkaibe na Naomi"
Adut Akech Bior enyi nwanyị Na-ekwe nkwa runtown nlereanya ọsọ soundgod
Nwabunie Arah July 24, 2020
Rave News Digest: Etupụrụ Woodberry's Fraud Case, China Na-enye US Iwu Imechi Consulate, Premier League Oge Ọhụụ + More
Falz's Bop papa, Skiibii na Obesere On Egungun + Egwu Afrịka ndị ọzọ maka izu ụka gị.
Phyno Ma Runtown On Mwere Uche Chukwu, MI Abaga + Latest African Songs Anyi N’anya
Izu Kachasị Mma Mma nke izu gara aga abụghị ihe mana ọkachasị
Ntuziaka kachasị mma nke izu: Dakore Egbuson, Yara Shahidi + Ndị ọzọ